အခြားကမ္ဘာတစ်ခုကအလား ထင်မှတ်ရစေမယ့် အံ့ဖွယ်မိုးမျှော်တိုက် (၁၄) ခု - ONE DAILY MEDIA
ရှေးခေတ်ကတည်းက ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် (၇)ပါးအကြောင်းကို လူတိုင်းကြားဖူးကြမှာပါ။ သို့သော် ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစိုက်မှုကိုခံထိုက်သော ပို၍ခမ်းနားသည့် အဆောက်အအုံများ ရှိပါ သေးတယ်။
မည်သည့်ခေတ်မီအဆောက်အအုံများက အံ့ဖွယ်စာရင်းထဲ ပါဝင်နိုင်သည်ကို ရှာဖွေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အများအပြားကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤအဆောက်အအုံများကို ကြည့်ရုံဖြင့်—သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို မယုံနိုင်လောက်အောင် အံ့ဩစေပါတယ်။ ဤဗိသုကာလက်ရာများအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။
(၁၄) တရုတ်နိုင်ငံ၊ Wujin ရှိ The Lotus အဆောက်အအုံ
တရုတ်နိုင်ငံ၊ Wujin အလယ်ပိုင်းရှိ Lotus အဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်။ လှပသော အဆောက်အဦးသည် ပွင့်နေသော ကြာပန်းပွင့်၏အမည်ကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဗိသုကာပညာရှင်၏ စိတ်ကူးမှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော လေထုဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံသည် မြို့ပြစီမံကိန်းဌာနဆိုင်ရာများ၏ အခြေစိုက်ရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
(၁၃) Alps တောင်တန်းရှိ မယုံနိုင်စရာဟိုတယ်
ဒါက ယုံတမ်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ မယုံပဲမနေနိုင်ပါဘူးယ ဒီဟိုတယ်ကို အဲလ်ပ်တောင်တန်းမှာ တည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဆောက်အဦဖန်တီးသူမှာ Andrii Rozhko ဖြစ်ပြီး၊ သူသည် ထူးထူးခြားခြား တောင်ပေါ်ရှုခင်းများကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ဟိုတယ်သည် ကြမ်းတမ်းသော ချောက်ကမ်းပါးကို ကပ်တွယ်ထားပြီး ထင်ရှားသော မှန်မျက်နှာစာရှိပါတယ်။
(၁၂) အိန္ဒိယနိုင်ငံ Bahapur ရွာရှိ Lotus ဘုရားကျောင်း
ကြာပန်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော နောက်ထပ် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အဆောက်အဦးမှာ ဗဟားအီယုံကြည်ခြင်း၏ အဓိက ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားမခွဲခြားဘဲ လူတိုင်းအတွက် ၎င်း၏တံခါးများကို ဖွင့်ထားပြိီး တံခါး ၉ ပေါက်ဟာ ဘာသာတရားအားလုံး၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသော ဗိမာန်တော်ဗဟိုခန်းမဆီသို့ ဦးတည်ပါတယ်။
(၁၁) နယ်သာလန်၊ ရော့တာဒမ်ရှိ ကုဗတုံးအိမ်များ
Rotterdam ရှိ Overblaak လမ်းတွင် အိမ် 40 အုပ်စုရှိပါတယ် ။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ဇောက်ထိုးပြောင်းသွားပြီလို့ သူတို့ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ် ။ အိမ်များကို ဗိသုကာပညာရှင် Piet Blom က ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး နံရံများနှင့် ပြတင်းပေါက်များအားလုံးကို ၄၅ ဒီဂရီ စောင်းထားပါတယ်။ အထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ တစ်ယောက်ထဲ နေရတာ ဘယ်လိုများလဲလို့ အံ့ဩမိတယ်။
(၁၀) ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဘရပ်ဆဲလ်ရှိ Atomium
အဆောက်အဦကို ကြည့်ရှုသူတွေကတော့ သတ္တုနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရုပ်တုတစ်ခုလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းသည် အပြည့်အဝထူးခြားသော အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြွန်များဖြင့် စက်လုံးများကြားတွင် ရွေ့လျားနိုင်ပြီး သိပ္ပံပြတိုက် သို့မဟုတ် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ Atomium သည် သံပုံဆောင်ခဲတစ်ခု၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဗဟိုပြုသည့် ကုဗယူနစ်ဆဲလ်ပုံစံဖြင့် သံအက်တမ် ၉ ခုကို သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။
(၉) စပိန်၊ ဗလင်စီယာရှိ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံမြို့
၎င်းသည် ခေတ်မီဗိသုကာပညာ၏ နောက်ထပ်ထူးခြားသော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဗလင်စီယာရှိ ပန်းခြံအလယ်ရှိ ရေပေါ်တွင်တည်ရှိပါတယ် ။ ၎င်းသည် တကယ်ကို အနာဂတ်ဆန်ပြီး အံ့ဖွယ်သားရဲများ၏ အရိုးစုကို အမှတ်ရစေပါတယ်။ အဆောက်အအုံ ၅ လုံး ပါဝင်ကာ ပလာဇာ၊ IMAX ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ပန်းခြံ၊ သိပ္ပံပြတိုက်နှင့် သမုဒ္ဒရာ ဥယျာဉ်တစ်ခုတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၈) အဇာဘိုင်ဂျန်၊ Baku ရှိ Heydar Aliyev စင်တာ
Heydar Aliyev Center သည် Baku တွင် အထူးဆန်းဆုံးနှင့် အသိအမှတ်ပြုခံရဆုံးသော အဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်။ “ဂြိုလ်သားများ” ပုံသဏ္ဍာန်များကို နှစ်သက်ကြောင်း လူသိများသော အမျိုးသမီး ဗိသုကာပညာရှင် Zaha Hadid သည် အဆောက်အဦ၏ပုံစံကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အတွင်းတွင် ပြပွဲခန်းမများနှင့် ရုံးခန်းများရှိပါတယ်။
(၇) ဆွီဒင်၊ Malmo ရှိ Emporia စျေးဝယ်စင်တာ
ဤစျေးဝယ်စင်တာသည် Scandinavia တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။။ နှစ်ထပ်ကွေးမှန်သည် အဆောက်အဦးပြိုလဲသွားသကဲ့သို့ ထောင့်ဖြတ်အပေါက်ကို ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ အတွင်းတွင် ဧည့်သည်များနှင့် ဈေးဝယ်သူများသည် ရောင်စုံစက်လှေကားများ၊ ခုံတန်းလျားများနှင့် မိုးပျံဥယျာဉ်များကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
(၆) စပိန်၊ Calpe ရှိ La Muralla Roja’
စပိန်တောင်ပိုင်းတွင် လူတိုင်းနေထိုင်လိုသော အိမ်ရာစီမံကိန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ၎င်း၏အမည်ကို “အနီရောင်နံရံ” ဟုပြန်ဆိုနိုင်ပြီး အဆောက်အအုံသည် အာရပ်မြေထဲပင်လယ်ဒေသ၏ ကျော်ကြားသောဗိသုကာလက်ရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုးကားထားပါတယ်။ အဆောက်အဦးအတွင်းတွင် အနီရောင်သည် ခရမ်းရောင်နှင့် အပြာရောင်သို့ ပြောင်းသွားပါတယ်။
(၅) စင်ကာပူရှိ အနုပညာသိပ္ပံပြတိုက်
ဤပြတိုက်သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် လက်ခုပ်တစ်စုံ သို့မဟုတ် ကြာပန်းတစ်ပွင့်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့အပေါ်တွင် သင်္ဘောတစ်စင်းနှင့် နောက်ခံရှိ မိုးမျှော်တိုက် ၃ လုံးမှာ Marina Bay Sands၊ ဇိမ်ခံဟိုတယ်နှင့် စင်ကာပူ၏ ဗိသုကာလက်ရာ အခြားလက်ရာများဖြစ်ပါတယ်။
(၄) UAE၊ Abu Dhabi ရှိ Capital Gate
အမြင့် 520 ပေ နှင့် 35 ထပ် တွင် ၎င်းသည် မြို့တော်၏ အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦးများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းများအရ Capital Gate ကို “ကမ္ဘာ့အဝေးဆုံးလူလုပ်မျှော်စင်” အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ မျှော်စင်သည် 18 ဒီဂရီစောင်းထားပါတယ်။ (နှိုင်းယှဉ်ပါက Pisa မျှော်စင်သည်4ဒီဂရီသာစောင်းပါတယ်)။ မိုးမျှော်တိုက်၏ ဒုတိယအမည်မှာ The Leaning Tower of Abu Dhabi ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) နယ်သာလန်၊ Rotterdam ရှိ Markthal
ဒီ Market Hall က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှပဆုံးပါ။ နယ်သာလန်ဘုရင်မတောင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို လာခဲ့ပါတယ်။ ဈေးသည် လူနေအဆောက်အအုံအတွင်းတွင် မုခ်ဦးပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ အဆောက်အဦအတွင်းပိုင်းကို Arno Coenen မှ ဖန်တီးထားသော သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငါးများနှင့် ပန်းပွင့်များဖြင့် အလှဆင်ထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အချို့က စျေးကွက်ကို Sistine Chapel of Rotterdam ဟုခေါ်ကြပြီး အနုပညာလက်ရာများကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
(၂) စပိန်၊ Bilbao ရှိ Guggenheim ပြတိုက်
၄င်းသည် Deconstructivism ပုံစံဖြင့် ကမ္ဘာ့အခမ်းနားဆုံး အဆောက်အအုံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဗိသုကာပညာရှင် Philip Johnson က ၎င်းအား “ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏ အကြီးကျယ်ဆုံး အဆောက်အဦး” အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပြတိုက်တွင် အမြဲတမ်းနှင့် ယာယီ ပြပွဲများ ရှိပြီး အမြဲတမ်းပြပွဲသည် 20 ရာစု၏အနုပညာအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နယူးယောက်မြို့ရှိ Guggenheim ပြတိုက်နှင့် မတူပါဘူး။
(၁) သြစတြီးယား၊ Graz ရှိ Kunsthaus Graz
ဤခေတ်မီပန်းချီပြခန်းကို “Friendly Alien” ဟုခေါ်ပါတယ်။ ဝေလငါး၏နှလုံး သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံ၏ပုံသဏ္ဍာန်ဟာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရမှာပါ။ Kunsthaus ကို ဆန်းသစ်တီထွင်သော blob ဗိသုကာပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အဆောက်အဦများတွင် အော်ဂဲနစ်၊ အမီဘာပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ဗိသုကာလက်ရာများဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ “Alien” ဟာညအချိန်တွင်တောက်ပပါတယ်။
Bonus ; ပုံမှန်မဟုတ်သောမြင်ကွင်း ဗိသုကာပညာ
ဘာစီလိုနာမှ မီဒီယာအနုပညာရှင် Victor Enrich သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အဆောက်အအုံများကို ဖန်တီးကာ ရှိပြီးသားဗိသုကာလက်ရာများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် ကွန်ပြူတာအကူအညီဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြယ်လှယ်ခြင်း မှော်ဆန်မှုများကြောင့် မိုးမျှော်တိုက်များနှင့် အခြားအဆောက်အအုံများသည် ကွေးညွှတ်ကာ အတွင်းအပြင်ဘက်သို့ ပြောင်းလဲသွားပုံပေါ် နေပါတယ်။
ဘယ်အဆောက်အဦးက သင့်ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ ?? ၎င်းတို့ကို လက်တွေ့ဘဝတွင် သင်မြင်ဖူးပါသလား ??
လူတွေဘာကြောင့် အသားနာခံပြီး ခန္ဓာကိုယ်အလှဆင်ကြတာလဲ ???